အတွေးအမြင် | Page3| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
သမ္မတလောင်းများ၊ မျှော်လင့်မှုများနှင့် မြန်မာ့အရေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းအကြား ဆက်ဆံရေးသည် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပိုမိုအားကောင်း လာနိုင်ပြီး နှစ်ဦးအကြား မဟာမိတ်အသွင် ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း ကောက်ချက်ပြုမှုများ ရှိနေသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အကြား သုံးနားညီ ဆက်ဆံရေးသည် ပုံရိပ်စစ်လား၊ ပုံရိပ်ယောင်လား ဆိုသည်ကိုမူ တိတိကျကျ မှတ်ချက်မပြုနိုင်ကြချေ . . . .
အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အာဏာရှင်ခတ် တစ်လျှောက် သုံးခဲ့တဲ့ မူဝါဒနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အလုံးစုံစွန့်ပစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေကို အစိုးရအပါအ၀င် နိုင်ငံသား အားလုံးကလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ခံယူကြပါစို့ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်လိုသူတွေ၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ မမှန်မကန် လုပ်နေသူတွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း နောက်ဆုတ်သွားမှာဖြစ်...
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော စိတ်ဓာတ်နှင့် . . .
By jackiekyaw 3097 days ago on အတွေးအမြင် from www.news-eleven.com
တစ်ကိုယ်ကောင်း သမားတွေဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကိုပါ နောက်ပြန်ဆွဲစေနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေဟာ အသေးအဖွဲ ကိစ္စလို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီပြဿနာဟာ မြန်မာ့လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တမြည့်မြည့် လှိုက်စားလာနေတဲ့ အဓိက လူမှုပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒီပြဿနာဟာ ဘယ်လိုစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းမျိုး၊ ဥပဒေမျိုးနဲ့မှလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အသိစိတ်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မှ ပြေလည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် . . . . .
ပျော်ရွှင်ဆေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အိပ်ဆေးအဖြစ် လည်းကောင်း ဖတ်ရှုသုံးဆောင်နေသော စာဖတ်ပရိသတ် အင်အားသည်လည်း မနည်းလှပေ။ ၀တ္ထုပင်ဖြစ်စေ၊ ကဗျာပင်ဖြစ်စေ၊ စာပေအရာဝင်သော ဆောင်းပါးများပင် ဖြစ်စေ ဖတ်လိုရာ ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖတ်ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရန် လိုအပ်သည် . . . . .
စာပေက မိမိအား ဘ၀အကျိုးပေး မွန်မြတ်အောင် အကျိုးပြုမှသာလျှင် စာဖတ်တတ်သူ စာဖတ်တတ်သည်ဟု ခေါ်ချင်ပါသည်။ အကျိုးပြုသော စာပေကို ရွေးချယ်ဖတ်တတ်မှ သာလျှင် စာဖတ်တတ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ စာကိုဖတ်၍ မိမိဘ၀၌ ထူးကဲသော အကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားရမှသာလျှင် စာဖတ်ရကျိုး နပ်ပေမည်။
By miemiekhine 3097 days ago on အတွေးအမြင် from www.news-eleven.com
မိမိရဲ့ ကလောင်တစ်ချောင်းဟာ ဘ၀တစ်ခုကို ပျက်စေတတ်သလို ကုမ္ပဏီတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးစေတတ်တယ်။
တကယ်တော့ လောကမှာ မကောင်းတာနဲ့ ကောင်းတာနှစ်ခုတည်း ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ မကောင်းတာနဲ့ ကောင်းတာအကြားမှာ အဆင့်တွေလည်း အများကြီး ရှိသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ဖြစ်တာကို ဖြစ်တဲ့အတိုင်း မြင်တတ်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပဲ . . . . .
အမြင်တွေဟာ အမျိုးမျိုးပဲ။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ နှစ်မျက်နှာတည်းရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတစ်ပြားလို မဟုတ်ဘူး။ စာမျက်နှာ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ စာအုပ်တွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် လူတွေဟာ မိမိရဲ့စိတ်ကို တစ်နေရာမှာ အမှတ်ထားပြီး အစွဲအလမ်းတွေ ရှိတယ်။
ဘာသာမဲ့တို့ သေလျှင် မည့်သည့်ဘုံ ရောက်မည်နည်း
By suwatisoe 3098 days ago on အတွေးအမြင် from www.innewsmyanmar.com
ယင်းနောက်ကွယ်တွင် မည်သည့်အရာများ ရှိသနည်း။ သေပြီးလျှင် ဘာဖြစ် သနည်း။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ သေသော သူသည် ပထဝီမြေကြီး အတွက် အထောက်အပံ့သာ ဖြစ်သွားရသည်။ အရိုးစုများ ကြွင်းကျန်၍ နောက်ဆုံး အားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒီတော့ သူသည် ဘယ်မှာ လဲ။ ဘယ်မှာမှ မရှိတော့ပါ။ ရုပ်ကော၊ ခန္ဓာပါ ဤနေရာတွင် တစ်ခါတည်း ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်။ ထုိ့ကြောင့် လူဝင်စားလည်း မရှိ၊ နတ်ဝင
သက်မဲ့ဘုရားနှင့် သက်ရှိ ရဟန်းတွင် ဘယ်အလှူ ပိုမြတ်သနည်း
By cherrythet 3098 days ago on အတွေးအမြင် from www.innewsmyanmar.com
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် ဘုရားသားတော် ရဟန်းများကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် မှာကြားခဲ့ပြီးသား ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ မှာကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် ယနေ့တိုင် ဘုရားသားတော် ရှင်ရဟန်း၊ ဆရာတော် များကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် သာသနာတော် တည်တံ့ပြန့်ပွားရသည်။
ထိုသို့ သာသနာအဓွန့်ရှည်စေရန် မျှော်မှန်း၍ ဟောကြားပေးအပ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကို လည်းကောင်း၊ ရှင်တော် ဘုရား ဟောကြားအပ်သော တရားတော်များကို နာကြားနေ ရသော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ သာသနာ့ဘောင်အတွင်းတွင် နေထိုင် အသက်ရှင် နေရသောကြောင့် လည်းကောင်း အစရှိသဖြင့် အကျိုးကျေးဇူး များစွာကို သိရှိနားလည်သည့် အနေဖြင့် အသက်မရ
By nyomyint 3099 days ago on အတွေးအမြင် from ayeyarwaddylibrary.blogspot.sg
လူသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သတ္တ၀ါ ဖြစ်၍ အချင်းချင်း အပေါ် ပြေပြေလည်လည်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံနေကြရသည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေလည်ကောင်းမွန်လျှင် ကောင်းမွန် သလောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းတွင် မိတ်ဆွေကောင်း ၊ ဘ၀ခရီးဖော်ကောင်းများ သည်
By jasmineaye 3104 days ago on အတွေးအမြင် from burma.irrawaddy.org
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ကျော် သည်နေရာလေးသို့ ကျနော်တို့ ရောက်စအချိန်တွင် အိမ်ကလေး၏ အရှေ့ဘက်မှာ၊ တောင်ဘက်မှာ တွေက အခုလို ဝင်းတွေခြံတွေမရှိသေး …။ ပိတ်စွယ်ရိုင်းပင်တွေ တောထနေသည့် ကွင်းပြင်ကြီးပဲ ဖြစ်သည်။အိမ့်တောင်ဘက် ခေါင်းရင်းမှာလည်း ရေအိုင်တအိုင်ရှိသည်။ ကြည်လင်သောရေမှာ ကြာပန်းတွေလည်း ပွင့်နေ၏။ ညနေစောင်းလျှင်ဖြင့် အနောက်ဘက် ရေကန်ကြီးတွေရှိသည့် ခြံကြီးထဲသို့ ဗျိုင်းအုပ်တွေ အိပ်တန်း လာတက်သည်။ ထိုနေရာရောက်မှ ဗျိုင်းအုပ်ကို တွေ့ဖူးခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ဘဝကိုမပြောင်းတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ သင့်ဘဝကို မရောင်းပါနဲ့
By cherrythet 3104 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
အထူးသဖြင့် အခုလို နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးမှာ မိဝေးဖဝေး၊ ဆွေဝေးမျိုးဝေး၊ တချို့လင်ဝေး၊ မယားဝေး၊ သားဝေး၊ သမီးဝေး လာရောက်လုပ်ကိုင် ဝင်ငွေရှာနေသူတွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေ၊ ခွန်အားတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပျိုဆုံး၊ အသန်စွမ်းဆုံး၊ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေ စတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတင် ကျွန်တော်တို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းချထားကြတာဟာ မဟုတ်ပါဘူး။
By YaminThu 3105 days ago on အတွေးအမြင် from www.thettantcho.com
တချို့လူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အာဏာကိုဗန်းပြပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ professional ပိုင်းမှာ ၀င်စွက်ဖက်တာတွေရှိတယ်တချို့လူတွေက စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးပြောင်တာကို မက်မောနေကြတာတွေရှိတယ်
ကိုယ့်ထက် သာသူများထံမှ သင်ယူပါ
By suwatisoe 3117 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
မာနထောင်လွှားမှုသည် အောင်မြင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုရရှိလိုသည့်သူတိုင်း စွန့်ခွာရမည့်အရာဖြစ်သည်။လက်တွေ့ကျသည့် သူတိုင်းသည် ရံဖန်ရံခါ မိမိကိုယ်ကိုအောက်ပါ အတိုင်းပြောသင့်သည်။ “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငါထက် ပိုမိုတော်သည့်သူ၊ ပို ကောင်းသည့်လူတွေ အများကြီးရှိသည်၊ အလွန်ကောင်းပါသည်”ဘာကြောင့်လဲ? လူတိုင်းသည် တစ်နေရာတွင်တော့ သာလွန်နေသည် မှာမဟုတ်ပါလား။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ဂေါက်ရိုက်နည်းသင်ပေးလျှင် ထိုသူသည် ဆရာဖြစ်သော်လည်း ထို ကလေးက စစ်တုရင် ကစားနည်း သင်ပေးလျှင် ထိုကလေးသည် ဆရာဖြစ်သည်။
By sandarmoe 3134 days ago on အတွေးအမြင် from newworldnanda.ning.com
ကိုယ့်အသိနဲ့ ကိုယ် မိုင်ပိုလျှောက်နေသူ၊ ကြီးကြပ်သူမရှိလည်း အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်နေသူ၊ အချိန်မှန် အလုပ်လာတက်သူ၊ သူတစ်ပါးကို ထောက်ထားညှာတာသူ၊ ပြောတာကို သေသေချာချာနားထောင်ပြီး အတိအကျ အကောင်အထည်ဖော်ပေးသူ၊ မုသားမပြောတက်သူ၊ အရေးကြီးလျှင် လက်မရှောင်ဘဲ အချိန်မရွေးအလုပ်လုပ်ပေးသူ၊ ပင်ပန်းမှု ကို မမှုဘဲ ရလဒ်ကိုပဲကြည့်သူ၊ ပင်ပန်းတဲ့ကြားက စကားချိုသာပြုံးရွှင်စွာ ယဉ်ကျေးသူ၊ ဒီလိုလူတွေကို နေရာတိုင်းက လိုချင်ပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံတွေ၊ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေဟာ အထက်ပါအရည်အချင်းတွေလောက် အရေးမကြီးပါဘူး။
လူဟူသည် အချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတတ်သည့် သတ္တ၀ါမျိုးဖြစ်ရာ မွေးကင်းစကပင် အာရုံခံအင်္ဂါတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်တတ်သည့်သဘောရှိ၏။ မွေးကင်းစမှ ရက်သားဘ၀တွင်မူ အချိန်နှင့်အမျှ အိပ်နေတတ်သည်ဖြစ်၍ အာရုံနှင့် အကြောဆိုင်ရာ တုံ့ပြန် မှုတို့ တက်ကြွမှု မရှိသေးဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် လသားကလေး ဖြစ်လာသည့်အခါ မျက်စိဖြင့် တုံ့ပြန်တတ်၏။ အသံလာရာသို့ စူးစမ်း တတ်၏။ အတွေ့အထိ၏ သာယာမှု၊ မသာယာမှု၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှု၊ ကြမ်းတမ်းခက်မာမှု၊ သွေ့ခြောက်နွေးထွေးမှုနှင့် စိုစွတ်အေးစက်မှု စသည်တို့ကို လိုလားသည့်အမူအရာ၊ မလိုလားသည့် အမူအရာတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်တတ်၏။ ကလေးသည် မျက်လုံးများ ကြည်လင်တောက်ပကာ ၀ူးဝူးဝဲ၀ဲ အသံပြုခြင်း
ကြီးပွားလိုသူ လူငယ်ဟူသမျှသည် မိမိလုပ်ဆောင်ရမည့် အမှုကိစ္စအ၀၀၌ “ကံ” တည်းဟူသော အလုပ်ကို “ဥာဏ်” တည်းဟူသော အသိအလိမ္မာ ပညာ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အကျိုး ရှိ-မရှိ နှိုင်းချင်ချင့်ချိန်ကာ “၀ီရိယ” တည်းဟူသော အားထုတ်မှု၊ “ဇွဲလုံ့လ” တည်းဟူသော တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် တံခွန်စိုက်ထူ၍ အောင်မြင်သည်ထိ ဆောင်ရွက်သွားကြရန် သန္နိဋ္ဌာန် ချထားသင့်ပေသည်။လူတစ်ယောက်သည် ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါတွင် မိမိ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိလာတတ်သည်။
By zawminnaing 3139 days ago on အတွေးအမြင် from www.thevoicemyanmar.com